Tratry ny tsingerintaona faha-10, Kindle, ny revolisiona famakiana elektronika | Vaovao momba ny gadget
Tratry ny tsingerintaona faha-10, Kindle, ny revolisiona famakiana elektronika
Misy orinasa eo amin'ny sehatry ny haitao mpanjifa izay nanova ny tsena: Apple an'ny an'ny finday marani-tsaina sy ny takelaka na Tesla misy fiara elektrika - ary ankehitriny andramany amin'ny kamio-. Na izany aza, ny Amazon goavam-be dia nahavita tsara tamin'ny iray amin'ireo sehatra nanjakazahany indrindra: ilay misy boky elektronika.
10 taona lasa izay dia nisy fomba hafa tena mahery nifidy teny an-tsena: ny safidy natolotry ny Japoney Sony na koa ireo safidy nomen'ny Grammata Espaniôla. Na izany aza, ny fantatry ny Amazon Kindle hoe ahoana no hatao tsara dia ny fananana ekosistema marina manodidina azy izay hanamora ny zava-drehetra amin'ny mpampiasa farany. Inona avy ireo safidy nomen'ny orinasa hafa hamenoana ny atiny eReader?
1 Mahalala ny fomba fananganana tontolo iainana iray manontolo izay mampiditra ny mpampiasa
2 Fanatsarana lehibe 'hardware'
3 Fifandraisana misy karazany roa: tena zava-dehibe amin'ny varotra Amazon
4 Ny 'fandresena' lehibe an'ny Kindle: tolotra maro amin'ny boky sy serivisy mifandraika amin'izany
5 Sehatra famoahana tena: afaka manana ny bokiny amin'ny Amazon ny tsirairay
6 Boky fivarotana tsara indrindra tany amin'ny Amazon Kindle
6.1 Boky foronina amidy indrindra:
6.2 Boky tsy foronina foronina amidy indrindra:
Mahalala ny fomba fananganana tontolo iainana iray manontolo izay mampiditra ny mpampiasa
Nandritra izay 10 taona izay, Kindle dia nametraka ny tenany ho laharana voalohany tsy azo iadian-kevitra ao amin'ny sehatry ny ranomainty elektronika. Ireo mpamaky be laza indrindra dia mahalala fa io no hany fomba ahafahana mitondra lohateny mihoatra ny iray aminao; nefa tsy mila mitondra lanja ny lamosina; miaraka amina teknolojia —e-Ink— izay tsy mandreraka ny maso ary mamela anao hanana tranomboky virtoaly nefa tsy mila mameno ny talantalana ao an-trano.
Toy izany koa, zavatra fantatr'i Amazon koa ny fomba hanaovana tsara azy miloka amin'ny multiplatform. Ary raha avelanao any an-trano ny Kindle anao, ahoana no hanohizanao mamaky? Ity dia iray amin'ireo fananana manohana ny fitaovana sy ny sehatr'ilay orinasa goavambe an-tserasera. Ary mamela anao hanana fampiharana manokana isaky ny rafitra fiasa ao amin'ny sehatra: Android, iOS, Windows na Mac.
Fanatsarana lehibe 'hardware'
Mahery ny sehatra Kindle, saingy marina ihany koa fa tsy maintsy miakatra amin'ity fitaovana ity ny fitaovana. Ary i Jeff Bezos dia nahalala nilalao karatra tsara foana. Nandritra izay 10 taona izay dia niova ny endrik'ilay mpamaky boky elektronika malaza. Ny maodely voalohany dia nanana kitendry QWERTY feno izay hanaovana anotations mora foana. Na izany aza, ny mpampiasa dia tsy maintsy nanadino ny momba ny jiro aoriana na ny efijery mikasika tamin'ny taona 2007 na 2008. Tamin'ny faran'ny taona 2011 vao niseho ny Kindle voalohany misy efijery mikasika: ny Kindle Touch.
Nanomboka teo, Amazon dia tsy nandao an'io endri-javatra io tamin'ny maodely mandroso kokoa. Izany hoe, ny katalaogy ankehitriny amin'ny 2017 dia misy modely 4 samy hafa izy rehetra ary namela ny bokotra ara-batana rehetra hanomezana toerana ny takelaka hikasika multi-touch hampiodina ny pejy.
Ankoatr'izay, avy amin'ny orinasan'i Jeff Bezos dia nieritreritra momba ny toe-javatra mety hamakiana rehetra ihany koa izy ireo. Ka tsara kokoa ny mampifanaraka ny maodely sasany amin'ny toe-javatra tsy dia mahazatra loatra: modely miaraka amin'ny fampisehoana e-ranomainty backlit ho an'ny mpamaky alina ary vao haingana kokoa, maodely afaka miaritra rano.
Fifandraisana misy karazany roa: tena zava-dehibe amin'ny varotra Amazon
Mazava ho azy, raha mila mpamaky tanteraka ianao dia mila miloka amin'ny fifandraisana tsy misy tariby afaka manome ny fahalalahan'ny mpampiasa hisintona na aiza na aiza. Ary toy izany koa: misy ny fifandraisana WiFi sy 3G ahafahan'ny boky misintona amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny maodely 3G ekena tsara dia ny Amazon dia mikarakara ny fandoavana ny fifandraisana 3G an'ny Kindle anao; ny orinasa dia miahy bebe kokoa ny hoe manohy mividy lohateny sy mampiasa ny sehatra misy azy ianao.
Ny 'fandresena' lehibe an'ny Kindle: tolotra maro amin'ny boky sy serivisy mifandraika amin'izany
Raha niditra tao amin'ny katalaogin'ny boky Kindle ianao dia ho hitanao fa goavambe - toy ny any amin'ny fivarotam-boky ara-batana izay ahitanao lohateny. Lavitra, Misy maodely varotra samy hafa, izay tsy maintsy dinihan'ny mpanjifa izay mety indrindra aminy. Hanana ny Kindle Flash amin'ny andro ianao: tolotra izay matetika maharitra 24 ora izay anoloran'i Amazon ny e-boky miaraka amin'ny fihenam-bidy izay mety hahatratra 80%.
Misy ihany koa ny mety hisintomana lohateny tsy misy fetra - ity tolotra ity dia ho an'ny mpamaky be dia be - izay andoavana vola 9,99 euro isam-bolana ary ahafahanao mankafy titre mihoatra ny iray tapitrisa na mahita tolotra boky latsaky ny iray euro, 2 euro , sns. Antsoina io fombafomba io Kindle Unlimited.
Sehatra famoahana tena: afaka manana ny bokiny amin'ny Amazon ny tsirairay
Farany fa tsy farany, misy ny olana izay nahalalan'i Amazon tsara ny filalaovany ny karany. Betsaka ny mpanoratra izay rehefa avy namorona ny sangan'asany, na inona na inona antony, tsy afaka mahazo mpanonta hamoaka azy ireo izy ireo. Ary eto indray no nilalaovan'i Amazon: mamela ny famoahana tena ny orinasa ambanin'ny lampihazo Famoahana mivantana Kindle. Ary, toa, lohateny navoaka tamin'ny alàlan'ity zotra ity no iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny fisintomana. Mazava ho azy, ny vidin'ny asa farany dia manintona tokoa.
Boky fivarotana tsara indrindra tany amin'ny Amazon Kindle
The portal Mashable nanondro tato ho ato ny lisitry ny boky be mpividy indrindra eo ambanin'ny sehatra Kindle hatramin'ny nanombohany ny taona 2007. Aorian'izay dia havelanay anao ny lisitr'ireo lohateny foronina sy tsy foronina.
Boky foronina amidy indrindra:
Aloky ny volondavenona dimampolo (aloky ny dimampolo 1)
Ny lalao hanoanana
May amin'ny afo (GAME HUNGER)
Mockingjay (GAME HUNGER)
Darker ("Fifty Shades" notantarain'i Christian Gray 2)
Dimampolo aloky ny afaka (dimampolo shades 3)
Very (MPIVAROTRA TSARA)
Ilay zazavavy eo amin'ny fiaran-dalamby (Planeta iraisam-pirenena)
Tovovavy sy andriambavy: ny mpivarotra tsara indrindra ifotoran'ny tovovavy sy vehivavy, iray amin'ireo famoahana andrasana indrindra amin'ny vanim-potoana. (POCKET)
Eo ambanin'ilay Same Star (INK CLOUD) an'i JOHN GREEN (16 Okt 2014) Hardcover
Boky tsy foronina foronina amidy indrindra:
Tsy tapaka: Tantaran'ny Ady lehibe II momba ny fahavelomana, ny faharetana ary ny fanavotana
Tena misy ny lanitra (famoahana)
Milomano toy ny olona iray (Boky Nordika - kapiteny Swing)
Steve Jobs (MPIVAROTRA TSARA)
Ireo fiteny 5 amin'ny fitiavana: ny tsiambaratelon'ny fitiavana maharitra (Favorites / Favorites)
Sniper (American Sniper - Spanish Edition): ny tantaram-piainan'ilay sniper maty indrindra teo amin'ny tantaran'ny Etazonia Etazonia
Ny fahazarana 7 an'ny olona mahomby be - Fanontana nohavaozina sy nohavaozina (Orinasa sy talenta)
Ny fiainana tsy mety maty an'i Henrietta Lacks (Famborahana ny siansa)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Tratry ny tsingerintaona faha-10, Kindle, ny revolisiona famakiana elektronika
Ny Xbox One X vaovao dia manomboka amin'ny tongotra diso any Japon
Gaga antsika amin'ny mascot robotic vaovao i Boston Dynamics